IStudio 1, iRectory, iLinton, BD235HH
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLeigh Anne
Isitudiyo sethu esihle sibekwe kwimihlaba ye-Old Rectory, eyaqala ngenkulungwane ye-12. Niya kuzifumana nizinze kwenye yezona dolophana zintle kwi-yorkshire dales, kufutshane nomlambo i-Wharfe kwaye ilungele abakhweli beebhayisikile nabahamba ngeenyawo.
Esi studio sobutofotofo sixhotywe ngelinen emhlophe qhwa, iitawuli ezithambileyo, iTV kunye ne-wifi .IRectory ziiStudios zokuzilungiselela. Isitudiyo ngasinye sinekhitshi laso labucala kunye negumbi lokuhlambela leen-suite. Ikhitshi linamabhobho amabini eringi, i-convection microwave kunye nefriji. Sinikezela ngeziseko zeti, ikofu, amanzi, ubisi,. Amakhitshi alungile ukulungiselela isidlo sasemini esimnandi esipakishweyo sosuku lwakho lokuphuma.
Nceda uqaphele ikhowudi yeposi yeRectory yiBD23 5HH. Le idweliswe (kwiwebhusayithi efihliweyo) imephu ayilunganga.
4.89 · Izimvo eziyi-240
ILinton-in-Craven ibekwe kumbindi weYorkshire Dales. Umjelo, 'iLinton Beck', uhamba phakathi elalini emva koko uye kuMfula iWharfe onomtsalane omalunga neemitha ezingama-600 kuphela. Imbali yeelali iqalela kwinkulungwane ye-12 xa indawo yokuqala 'yeRectory' yakhiwa kwindawo yangoku. Izindlu ze-Alms ezakhiwe yi-Lord Fountaine zezona zinto ziphambili kwidolophana, zinconywa yi-2 iibhulorho zembali. I-Linton inendawo enomtsalane yendalo ye-dales pub ebizwa ngokuba yiFountaine ethengisa ukutya okumnandi, i-ale yokwenyani kwaye ibekwe kwindawo eluhlaza kwilali. IGrassington kunye neBurnsall zombini zikumgama wokuhamba / wokuhamba ngebhayisekile. ILinton yindawo enqamlezileyo egqitywe ziihambo ezininzi ezibukekayo ezibandakanya i-thje dales way.
Umbuki zindwendwe ngu- Leigh Anne
Ndicela undazise xa unqwenela ukudibana nam ngexesha lokuhlala kwakho, kungenjalo ndizokushiya uyonwabele ixesha lakho eLinton.Ukuba uyandidinga ndicela ufowune okanye ubhale umyalezo kwaye ndiza kusabela kwangoko.
ULeigh Anne yi-Superhost